DHAGEYSO:-Lafta-gareen oo loo doortay madaxweynaha Koonfur Galbeed
Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen ayaa maanta loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, isaga oo beddelaya Shariif Xasan Sheekh Aadan. Lafta-gareen ayaa ku guuleystay doorasho dhowr mar oo hore dib loo dhigay oo maanta ka dhacday magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka Koonfur Galbeed. Waxa uu helay […]
Dowladda Soomaaliya oo wafdi korjoogta ka noqda doorashada Koofur Galbeed u dirtay Baydhabo
Dowladda Soomaaliya ayaa wafdi Wasiiro u dirtay magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay, halkaasoo lagu wado inay maanta ka dhacdo doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed. Wafdiga ayaa waxaa hoggaaminaya Wasiirka Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo dib u heshiisiinta Xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye, si ay korjoogto uga noqdaan doorashada muranka badan ka taagan yahay. Sidoo kale lama sheegin […]
DHAGEYSO:-Hogaamiye Gaas oo loogu baaqay in uu ka haro doorashadda puntland maxay tahay sababtu?
Siyaasi Daahir Cabdulqaadir Muuse (Daahir Ciiro) Oo kamid ah Siyaasiyiinta Soomaaliyeed marna soo noqday Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay Musharaxnimadda mar kale C/wali Maxamed Cali (Gaas). Siyaasiga ayaa sheegay in C/wali Gaas uu ku fashilmay hogaaminta Puntland sanadihii uu xilka hayay, islamarkaana hada ay haboontay in uu kursiga baneeyo.
DHAGEYSO:-Sheekh Cali Wajiis “Aniga Mooshinka Aas-Aaskiisaba baadil ayaan u arkaa,waana la ogyahay in aan la ridi karin Madaxweynaha”
Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimada sida weyn looga yaqaano somalia iyo caalamka ayaa tageero buuxda la garab istaagay madaxda qaranka wuxuuna si cad u sheegay in mooshinka ay soo gudbiyeen kuwa qaran dumiska ay tahay mid xaraan ah sida uu hadalka u dhigay sheekha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in aan […]
Burcad Dhibaato Ku Heysa Shacabka Magalada Jigjiga
Dadweynaha ku dhaqan magaalada Jigjiga ee Dowlad Deegaanka Soomaalida ayaa ka cabanaya tuugo dhac u gaysaneyso shacabka oo maalmihii ugu dambeysay dhibaato ku hayay magaalada. Tuugadan ayaa dhac ka gaysata magaalada xilliyadii habeenkii iyo maliinkiiba, waxayna shacabka ka dhacaan telefoonada halka qaar kamid ah ay waddooyinka u fariistaan shacabka. Qaar kamid shacabka Jigjiga ayaa sheegay […]
MUUQAAL:-Socdaalkii ONLF ee Gobolka Qoraxay Iyo Soodhawayntii Shacabka Magaalada Qabridahare
Dawladda Mareykanka oo Soomaaliya ugu yaboohday boqolaal milyan oo doolar
Labadii bishan ayaa dawladda Mareykanka si rasmi ah u shaacisay in dib loo furey safaaradooda Soomaaliya, sidoo kale hey’adda kaalamada dibadda ee Mareykanka USAID ayaa si toos ah uga shaqo bilowday dalka. Danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto oo maanta soo saaray war saxaafadeed ayaa sheegay in Soomaaliya ay siin doonaan adduun gaaraya lacageed oo […]
DAAWO:-Cabdiraxman cabdishakuur”Dowlada Soomaaliya Iyo Shabaab waa Isku Mid”
Cabdiraxman cabdishakuur warsame oo Ah Siyaasi Mucaarad Ah Isla Markaasina Hogaamiya Xisbiga Wada Jir Ayaa Si kuluul u eedeyey Dowlada Soomaaliya Inay Ka xirtay wadooyinka Muqdisho.
Magalada Baydhabo ayaa saakay waxa alaga dareemayaa diyaar garoowgii u dambeeyay ee ku aadan doorashada Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo saacadaha soo socda ka dhaceysa Magalada Baydhabo. Ila 5 Musharax ayaa u taagan qabashada xilka Madaxweynaha Koonfur Galbeed,kuwaas oo qaarkood la sheegay inay wadato dowladda Federaalka Soomaaliya. Maalmihii Axadii iyo Isniintii lasoo dhaafay ayay musharixiinta kala […]